Todobaadkii ka horeeyay dagaalka - BBC News Somali
Todobaadkii ka horeeyay dagaalka
4 Agoosto 2014
Lahaanshaha sawirka RIA Novosti
Markii la gaaray 31 July Europe waxay qarka u fuushay dagaal buuxa. Inkastoo la isku dayay in xal diblomaasiyadeed la helo markii la dialy Archduke Franz Ferdinand, ayaa si isdaba joog ah waxaa u dhacay waxyaabo loogu soo dhowaaday dagaal buuxa. 28-kii July, Austria-Hungary ayaa ku dhawaaqday dagaal ay la gasho Serbia, iyadoo doomaha dagaalka u dirtay Danube.
Muddo sadex maalmood ah gudahood ayaa Russia iyo Germany, waxay isugu yeereen si buuxda ciidamadooda. Dhinaca kale magaalada London, ayaa u sii siqashada dagaalka uu keenay iib cabsi la socoto ee suuqyada maaliyadda, waxaana la xiray suuqa isdhaafsiga lacagaha markii ugu horeyasay tan iyo sanadkii 1773. Wixii markaas ka dambeeyay maalin walba dhibaato hor leh ayaa la maqlayay.
Europe ayaa hadda saacado u jirta dagaal. Belgium iyo France labaduba waxay ciidamadooda ku amreen in ay diyaargaroobaan. Telegaraam ka yimid amiirka Lichnowsky, ayaa safiirka Germany ee London, wuxuu keenay war lama filaan ah oo sheegay in Britain ay dagaalka dhexdhexaad ka noqon doonto hadii Germany ay ogolaato in aysan weerar ku soo qaadin France. Hogaamiyihii Germnany ayaa ku amray taliyayaashiisa Military in ay joojiyaan dhinaca galbeedka ciidamada ay ku uruurinayeen oo loo diyaargaroobo in lo dhaqaaqo dhinaca bariga ee dalka Russia. Balse, saacado uun kadib, waxaa soo baxay warar sheegaya in safiirka Lichnowsky uu qalad u fahmay mowqifka Britain, waxaana markaa dib u soo laabtay qorshihii Germany ay ku soo weeraraysay France. Gudaha Russia, safiirkii Germany ayaa u gudbiyay wasiirkii dibedda Russia Sergei Sasonov go’aanka ay dagaalka ku iclaamisay Germany.
Wadaadka ugu waynaa Russia, Grigori Rasputin ayaa boqorka u diray digniinta ah “Badwayn dhan oo ilmo(ooyin) ah” hadii ay Russia dagaal gasho. Kadib markii ay gashay Luxembourg, ayaa Germany ay digniin kama dambays ah u dirtay dowladda Belgiam, oo ay ka dalbatay si nabadgalyo ah in ay u dhexmarto. Magaalada London, dowladda Britain Ayaan wali go’aansan tallaabada xigta ee ay qaadi doonto balse, the British government is still undecided about what to do next but the Taliyaha guud ee ciidamada, Winston Churchill, ayaa ku hanjabada in uu xilka ka degayo hadii dhexdhexaadnimada Belgium ay wax iska badalaan. Ra’iisul wasaaraha Henry Asquith ayaa xushay dareenka guud ee reer London ee ku aadanaa dagaalka iyo in la galo, waxaa uu yiri “Hadda gambaleelka dagaalka ayay ka dhawaajinayaa, todobaadyo gudahood gacmahooda ayay maroojin doonaan.” Waqti dambe oo habeenkii ah, ayaa Beljium ay diiday waqtiga kama dambaysta ah ee ay u qabatay in ay ogolaato ciidamada Germany in ay dalkeeda dhexmaraan. Tallaabadaas oo diblomaasi Germany u dhashay uu ka yiri “Alle, doqonsanaa masaakiintu!”.
Waa maalin fasax ah magaalada Lodnon, balse golaha wasiirada ayaa mar kale kulmaya si ay dhibaatada uga wadahadlaan. Galabnimadii, xoghayaha arrimaha dibedda Sir Edward Grey ayaa ka dhex istaagay golaha baarlamaanka oo aad u buuxay si uu ugu bandhigo mowqifka Britain. Wuxuu sheegay in dhexdhexaadnimada Britain ay dhaawac ka soo gaari karto dagaalka oo hadii dhinac la iska taago, “ay meesha ka bixi doonaan , sharafta, magaca wanaagsan iyo sumcadda” ay Britain leedahay. Magaalada Paris, Safiirka Germany ayaa fariinta dagaal u gudbiyay Faransiiska. Xoghayaha arrimaha dibedda Britain oo taagan daaqadda xafiiskiisa, ayaa yiri “Nalalkii ayaa ka sii damaya dhamaan dalalka Europe, inta aan nool nahay dambe ma arki doonno iyagoo dib loo shido. “
Faransiiska waxay ku soo baraarugeen iyagoo dagaal lagu soo qaaday. Britain waxay Germany u dirtay digniin kama dambays ah oo ah in ay tixgaliso dhexdhexaadnimada Belgium, iyadoo u qabatay waqti kama dambays ah oo ahaa 11-ka habeennimo waqtiga GMT. Waa digniin lala daahay, waayo waxaanay Britain ogayn in ciidamada Germany ayba ku jiraan xilligaas Belgium. Dadwayne ayaa isugu soo baxay dibedda guriga dowladda, iyadoo saacaduna ay ku socoto. Markii la dhaafay waqtigii ay Britain qabatay, ayaa Britain dagaal isu diyaarisay. Wargayska the Times ayaa ku waramay in xitaa kadib saqdii dhexe waxaa la maqlayay “guuh aan joogsanayn iyo dad heeasaya” balse “malagii dhimashada ayaaba doonta wax ka saaran, dunida waxay maqli karaysaa garaaca garbihiisa. “
Wax ka yar laba iyo toban saacadood kadib ayaa si cad dagaal loogu dhawaaqay, wargaysyada Britain ayaa lagu qoray baaq in ay dadku iskood ugu soo xaadiraan ka qaybalka dagaalka. Calankii Germany, ayaa laga dajiyay safaaradda Germnay ee London iyadoo safiirkii Brtainna laga soo saaray magaalada Berlin. Wargaysyada Germany, ayaa dubraanka u tumayay dagaal, iyagoo sheegay in dadka Belgium ay ku kaceen falal ka dhan ah askarta Germany. Meel kasta waxaa laga soo sheegay sirdoonka Russia. Dhinaca galbeedka waxaa dagaal uu ka socday magaalada aadka loo xoojiyay difaaceeda Liege ee dalka Belgian, waxaana difaacaya askar lagu qiyaasay ilaa 40,000. Germany waxay aad ula yaabtay in ay la kulanto iska cabin sidaas u xoog badan. Montenegro ayaa dhinaca kale ku dhawaaqday dagaal in ay la galayso Austria- Hungary.
Austria-Hungary ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Russia iyo Serbia oo sheegtay in ay la dagaalamayso Germany. Diyaarad dagaal uu Germany leedahay ayaa duqeeyay magaalada Liege, waxaa uu ahaa weerarkii dhinaca circa ah ee ugu horeeyay ee lagu qaado magaalo Europe ah, waxaa ku dhintay sagaal qof oo rayid ah. Boqol iyo konton kun oo ciidamo German ah ayaa hadda ku sugan hareereeyay difaaca Belgium, balse 8 kun oo ka mid ayaa dagaalka ku dhintay markaaba. Xoghayaha Britain ee dagaalka, Lord Kitchener, ayaa u sheegay saaxiibadii in uu filayo in dagaalku uu socon doono muddo sadex sano ah. Ciidamada Faransiiska oo ka tagay Dahomy ayaa qabsaday magaalada xadka ku taalla ee Anecho – Waa qabsashadii ugu horeysay ee dhulka Germany.
Kadib habeen dhan oo duqayn ah, ciidamada Germany waxay gacant aku dhiteen Liege, oo aysan iska cabin kale kala kulmin. Dalka Britainna, dadwayne isku soo baxay ayaa isugu tagay xafiiska shaqaalaynta ee London, iyadoo loo baahday ciidamo in ay dib u riixaan dadka isa soo xilqaamay ee dagaalka diyaarka u ahaa. Ciidamadii ugu horeeyay British ah ayaa bilaabay in ay galaan dhulka Faransiiska, iyagoo ka amarqaadanaya Sir John French.
Montenegro ayaa ku dhawaaqday dagaal ay la galayso Germany. Faransiiska ayaa dagaalka galay, isagoo ku dayaya in uu dib u qabsado dhulkii looga qabsaday dagaalkii Franco-Prussian 43 sano ka hor. Waxay qabsadeen magaalada Mulhouse ee gobolka Alsace, inkastoo ay haysteen oo kaliya ilaa maalintii xigtay markii ciidamada Germany dagaal rogaal celis ah ku soo qaadeen. Markabka Xiddigga Cad ee ‘Oceanic’ ayaa gaaray dekedda Britian ee Southampton, iyadoo ay daba joogeen maraakiibta dagaalka ee Germany. Waxaa uu siday dahab iyo qalin iyo dad kala duwan oo rakaab ah. Waxaa dahabka qiimihiisa lagu qiyaasay 15 million oo doolar. Rakaabka waxaa ka mid ahaa saraakiill Britain iyo German ah.
Waxaa diyaariyay Barnaamijka Day by Day ee BBC
Qoraaga: Professor Margaret MacMillan
Soo saaridda: Russell Finch
Waxa BBC u sameeyay shirkadda ‘A Somethin’ Else Production’